အာရှရွှေကြောင်(Asian golden cat)ကို ကြောင်မင်း၊ ကျားမင်း၊ တမ်းမစ်ကြောင်ဟုလည်း ခေါ်တွင်သည်။ တမ်းမစ်ကြောင်ဟု ခေါ်တွင်ရခြင်းမှာ ဒတ်ချ်လူမျိုး သတ္တဗေဒပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သူ ကွန်းရက်ဒ် ဂျက်ကော့ဗ် တမ်းမစ်ကို အစွဲပြုပြီး အမည်တွင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အိမ်ကြောင်ထက်အနည်းငယ်ကြီးသော တောကြောင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အလွန်ရန်လိုသည်။ အခြားတောကြောင်မျိုးများက ကြောက်ရွံ့ကြသောကြောင့် ကျားမင်းဟုခေါ်သည်။ ကိုယ်လုံးမှာ ရွှေနီရောင် တောက်နေသဖြင့် အလွန်လှပသော ကြောင်မျိုးဖြစ်သည်။ 
မျိုးစိတ် P. temminckii
အမွေးများသည် အရောင်ညီညွတ်ပြီး၊ ထူးခြားစွာ အရောင်ပြောင်းလဲတတ်သည်။ အမွေးများသည် နီကြင်ကြင်မဟုတ်ပါက ရွှေလိမ္မော်ရောင် သန်းနေပြီး၊ အညိုရင့်ရောင်မှ သစ်ခေါက်ရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သော၊ မီးခိုးရောင်မှ အမည်းရောင်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သော အမျိုးအစားလည်း ရှိသည်။ မတူကွဲပြားသော ရောင်စဉ်များသို့လည်း ပြောင်းလဲတတ်သေးသည်။ အစက်အပြောက်များနှင့် အစင်းများဖြင့် မှတ်သားရသည်။ အဖြူနှင့် အနက်စင်းများသည် ပါးကိုဖြတ်ကာ ခေါင်းထိပ်သို့ တက်သွားသည်။ နားရွက်မှာ မည်းပြီး အလယ်ဗဟို၌ မီးခိုးရောင်သန်းသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အကွက်စက်များသည် ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနှင့် ခြေထောက်ပိုင်း၌သာ ပါတတ်ပြီး၊ အရောင်ပြောင်းတတ်သည့် ကြောင်အမျိုးအစားမှာမူ အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း၌လည်း အကွက်အပြောက်ရေးရေး တွေ့ရတတ်သည်။ တရုတ်ပြည်၌ အပြောက်ပါသော အရောင်ပြောင်း အမျိုးအစား တမျိုးရှိပြီးလျှင်၊ သစ်ကြောင်(豹猫)နှင့် အလွန်တရာ ဆင်တူသည်။
၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာအထိ သိရသမျှမှာ၊ ဥရောပအန္တရာယ်ကျရောက်နေသော မျိုးစိတ်များအစီအစဉ်၌ ပါဝင်သော ဥရောပတိုက်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ရှစ်ရုံမှ အာရှရွှေကြောင် အကောင် ၂၀ သာ ရှိသည်။ ၂၀၀၇ နှင့် ၂၀၀၈ ဇူလိုင်၌ ဂျာမနီ၊ ဝပ္ပာတယ်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ရှိ အထီးအမ တစုံမှ အောင်မြင်စွာ သားပေါက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကြောင်ကလေးနှစ်ကောင်သာ ပေါက်သည်။ ၂၀၀၈ တွင် ပြင်သစ်၊ ပါဒက်ဖယ်လင်ဥယျာဉ်၌ ကြောင်မလေးတကောင် ပေါက်သည်။ ဤမျိုးစိတ်ကို စင်္ကာပူတိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၌လည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပေသည်။ ၎င်းတို့မှ လွဲလျှင် ကျန်အရှေ့တောင်အာရှနှင့် ဩစတြေးလျရှိ တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များ၌လည်း အာရှရွှေကြောင်များကို အရေအတွက် အလွန်နည်းပါးစွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေရလေသည်။
↑ Nadig, S., R., N., Silva, A. P. (2016). "Small cats in the Himalayan foothills: the Asian Golden Cat of Nongkhyllem Wildlife Sanctuary, India". Small Wild Cat Conservation News 2.
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Lynam, A. J., Round, P. and Brockelman, W. Y. (2006). Status of birds and large mammals of the Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex, Thailand. Biodiversity Research and Training Program and Wildlife Conservation Society, Bangkok, Thailand.
↑ Wozencraft, W.C. (2005). "Order Carnivora", Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3rd, Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494။
↑ Lekagul, B. (1977). Mammals of Thailand. Bangkok: Association for the Conservation of Wildlife။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာရှရွှေကြောင်&oldid=532569" မှ ရယူရန်
၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၁:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၁:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။